ကောင်းကင်ကို: Free Thinker ကို ပုံဖော်ကြည့်ခြင်း
Posted by Kaung Kin Ko at 5:41 PM
သိပ်ကောင်းတဲ့ သုံးသတ်ချက်ပဲ ကိုကောင်း...။
ကိုမှ လုံးဝဥသုန်ပစ်ပယ်သူတွေ ဘယ်တုန်းကမှ မဟုတ်
I think 'Free'thought means thinking and philosophizing without any restrictions by dogmas and traditions.... That Freedom is the word for free in Freethought.
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ လောကမှာ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်လက်ခံတဲ့ စံတစ်ခုခု (မိရိုးဖလာအရ ထားတဲ့စံ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်.. ဖရီးသင်ကာဆိုပြီး တွေးရာကနေ ကိုယ့်ဘာသာ ထားတဲ့ စံဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်) နဲ့ပဲ တိုင်းပြီး အရာအားလုံး မှန်တယ် မှားတယ်.. တခါတလေ မှားမှန်းသိလဲ မှန်ပစ်တယ်.. မှန်မှန်းသိလဲ မှားပစ်တာမျုိုးပါပဲ.. အဲဒီ ဖရီးသင်းကင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ စံလဲမရှိ ပုံဖော်လို့လဲ ရမယ်မထင်တာမို့ ဒါကိုပုံဖော်တာဟာ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တာကို ပုံဖော် စံခတ်လိုက်တဲ့ တခြား ဥပမာပြချက်တွေနဲ့ပဲ သွားဆင်ပါလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်လို့ ရတဲ့ ပမာဏအနဲအများအလျောက် ချုပ်မတီးထားပဲ လွတ်လပ်စွာပဲ တွေးခေါ်ကြတာပါပဲလို့ မြင်ပါတယ်လေ.. တကယ်လို့ ဘာသာရေး အချုပ်အနှောင်တွေရဲ့ ပြင်ပကို ဖောက်ထွက်မတွေးဘူးဆိုတဲ့ လူတွေဆိုရင်တောင် သူတွေးခေါ်လို့ ရတဲ့ လွတ်လပ်မှုဟာ ဘာသာရေးထဲ ဘောင်ဝင်နေလို့သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲလောက်ထဲမှာပဲ ပိတ်လှောင်နေရလားလို့ အပြစ်တော့ မဆိုသာပြန်ဘူးဗျ.. ကိုယ်က ကိုယ်ပိတ်လှောင်တယ်ထင်တဲ့ ဒီဘက်ကနေ တခြားကိုယ့်ဘာသာ မှန်လှပြီလို့ သတ်မှတ်တဲ့ နောက်ဘောင်တစ်ခုထဲ ရောက်သွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပေတာကိုး.. ဘယ်ဘောင်က ပိုကျဉ်းသွားလဲဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှလဲ မြင်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်တာမို့ ဘယ်သူမှဘောင်ထဲက မတွေးပဲ သူ့စံနဲ့သူ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နေကြသူများလို့ပဲ မြင်ပါတယ်ဗျား.. ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘောင်နဲ့ကိုယ် ကန့်သတ်တွေးနေသူများလို့လဲ ပြောင်းပြန်တွေးလို့ ရပါလိမ့်မယ်လေ..
You can beafree thinker as I am but don't beafool! We are not living inaperfect world and there are more pious lunatics who will kill for their nude gods or goddesses or horny prophets with tiny penises and big sexual appetites than us, real free thinkers. So don't expect the world to become perfect because you discard your own religion or god you worship before. There are more fools than highly educated free thinkers. Dick heads will always overpower us with numbers. Religion is there, was there and will be there and therefore don't fool yourself that they will disappear soon for you to declareafree thinker.
ဂွတ်စ် မိုက်စ် ကြိုက်စ်
အင်း...အဲဒါမျိုး သဘောကျတယ်.. ကာလာမ သုတ်ကို ခိုက်တယ်...ဒါပေမယ့်... ဟိုတစ်ခေါက် ကိုကောင်းကျွန်တော့်ကိုဆုံးမသလို....ကာလာမ သုတ်မှာတောင် ဘာကိုမှ အရမ်ကာရော မယုံဖို့ ဆိုတာကို သတိထားမိသလို...ကိုယ်တွေ့ဆိုပြီး မီးကို ကိုင်ကြည့်စရာမလိုပဲ ပူ (အန္တရယ်ရှိစေ) မှန်း သိနိုင်တဲ့ ဥာဏ်မျိုးနဲ့ သူများအတွေ့ အကြုံကိုအမှန်လို့ လက်ခံနိုင်တဲ့ အသိမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။
Also visit my blog: dance
​ကောင်းတယ်​ အစ်​ကို.....အရမ်း ​ကောင်းတယ်​ .....
အစ်​ကို .... ကျွန်​​တော်​ အစ်​ကို့ရဲ့ မကျွတ်​​သေးတဲ့တ​စ္ဆေ ကဗျာ စာအုပ်​ PDF လိုချင်​လို့ ကူညီပါဗျာ အဲ့ထဲက ဗိုလ်​ချုပ်​ ကဗျာ​လေး ကို လိုချင်​လို့ပါ